सुशान्तकाे निधन हुने कुरा पहिल्यै थाहा थियाे ? – Jagaran Nepal
सुशान्तकाे निधन हुने कुरा पहिल्यै थाहा थियाे ?
सुशांत सिंह राजपूतको निधन उनका प्रशंसकहरूलाई स्तब्ध पार्‍यो, जो अभिनेताको ह’त्या भएको थियो भनेर शंका गरिरहेका थिए। उनीहरूले औंल्याए कि विकिपीडियाले अभिनेताको मृ’त्युको बारेमा खुलासा गरेको थियो वास्तवमै यो हुनु भन्दा अघि र पुलिसले बेलुका १२:३० मा पत्ता लगाएको थियो। जे होस्, के यो सत्य हो? यहाँ यसलाई नजिकबाट हेर्नुहोस्।
सुशांतले आफ्नी बहिनीलाई बोलाउँदा एक मिनेट पहिले विकिपीडिया पृष्ठ बिहान ८ः५९ मा अपडेट गरिएको थियो। अभिनेताले कथित रूपमा रात १० बजे जुस पिए र उनको कोठामा आफैंलाई बन्द गरे। अभिनेता वास्तवमा मृ,त फेला पर्नुभन्दा केही घण्टा अघि कसले सुशान्तको मृ,त्युको पूर्वानुमान गर्न सक्छ भन्ने सोचेर प्रशंसकहरू त्यहीं बाँचे।
यहाँ केहि ट्वीटहरू यस्तै प्रश्न गर्दैछन्:
According to report sushant 10 bje juice pi ke room mai gye fir 8:59 mai hi Wikipedia kaise update ho gya ki unhone suicide kiya it’s well planned murder.. #CBI @narendramodi @pmo @AmitShah @rashtrapatibhvn @PMOIndia @rajnathsingh
Police discovers Sushant is dead at 12:30 PM, while wikipedia was updated at 9:01 AM with his status as dead. pic.twitter.com/avVWVe0G5P
— Ravi Prakash Agrawal (@raviprakashagr1) June 30, 2020
सुशान्तको पेज वास्तवमै बिहान ९ बजे अपडेट गरिएको थियो, जस्तै ट्वीट्समा उल्लेख गरिएको थियो, तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण छ जुन प्रशंसकहरूले गुमाए। समन्वयित युनिभर्सल टाइम (UTC) मा विकिपेडिया अपडेटहरू, जुन भारतीय मानक समय (IST) भन्दा लगभग ५ घण्टा पछि छ। तसर्थ, यदि विकिपीडिया पृष्ठ बिहान9बजे युटीसीमा अद्यावधिक गरिएको थियो भने, पृष्ठ वास्तवमै आईएसएस अपराह्न २.२९ तिर अपडेट गरिएको थियो, जुन सुशांतको निधनको खबर आयो।
सुशांत आफ्नो बांद्राको घरमा आइतवार, जून १४ २०२० मा झु,ण्डिएको अवस्थामा भेटिए। अभिनेताको हाउसहेल्पले उनको शरीर भेट्टाए। सुशांतले कुनै सु,साइड नोट छोडेनन्, जुन मुम्बई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ कि अभिनेताको मृ,त्युमा कुनै भ्रामक खेल छ कि छैन। उनीहरूले हाल 28 भन्दा बढी व्यक्तिको अनुसन्धान गरिसकेका छन् जसमा सुशांतका करीबी मित्र रिया चक्रवर्ती र उनको ‘दिल बेचरा’ को-स्टार संजना सांघी छन्। आजतकबाट